Cher Biography uye Career Profile
Cher (akaberekwa musi waMay 20, 1946) ndiye muimbi uye mutambiki uyo basa rake rakabudirira rakapfuura makore makumi mashanu. Ari pakati pevanhu vashomanana vakakunda Emmy, Grammy, uye Academy Awards. Nhoroondo yake yepasi rose kutengesa inodarika mamiriyoni zana, uye yakazosvika # 1 pane imwe bhiribhodhi chati pane gumi yemakore kubva kuma1960 kusvika muna 2010s.
Akaberekerwa Cherilyn Sarkisian, baba vaCher vaiva mutyairi wemotokari uye amai vake vaiva muenzaniso uye mudiki-chikamu actress.
Vabereki vake vakarambana paaiva nemwedzi gumi chete. Gare gare, amai vake vakaroora uye vakabereka mwana wechipiri mwanasikana. Ukama ihwohwo hwakaguma apo Cher aiva mapfumbamwe. Amai vake vakarooranazve kakawanda, uye mhuri yacho yaigara ichifamba-famba munyika.
Kudzinga chikoro pazera remakore gumi nematanhatu, Cher akatamira kuLos Angeles neshamwari. Akatora makirasi uye akashanda kuti awane mari yekuzvitsigira. Cher akasangana naSonny Bono muna 1962 apo aive munyori wechirangaridzo uye mutevedzeri wekukwidziridza muparidzi Phil Spector . Akabvuma chikumbiro chaSnnyny kuti ashande seimba yake. Mukudzoka, akamuudza kuna Phil Spector. Cher yakaonekwa pane dzakawanda zvakanyorwa semunyaridzi wekuchengetedza kusanganisira Ronettes '"Be My Baby" uye Righteous Brothers' "Wakarashika Kuti Lovin 'Feelin'." Phil Spector akaitawo rekodhi rekutanga reCher, mumwe asina kubudirira ainzi "Ringo, I Love You" uye akasunungurwa pasi pezita rokuti Bonnie Jo Mason muna 1964.
Mukuguma kwegore ra1964, Cher akasayina kambani yekurekodha neLiberty Records, uye Sonny Bono akashanda semurimi wayo. Yakabudiswa pamusiyo weImperial imprint, chinyorwa chake chaBob Dylan cha "All I Really Want To Do," yekutanga inonzi yakanzi Cher, yakakosha pamusoro pe20 pamusangano weU.S. singles chete.
Cher naSonny Bono vakaita mutambo wavo wokuroorana muna 1964.
Akamukurudzira kuti aite naye semuviri nokuti yakabatsira kudzikisa kutya kwake. Pakati pezvinetso zvemakambani mukupera kwema1960, Sonny akatanga kutambidzana nevamwe vakadzi, uye ukama hwakatanga kuparadzaniswa. Mukuedza kutora Cher back, Sonny akazoroora, uye mwana wavo Chastity Bono akaberekwa musi waMarch 4, 1969.
Mukutanga kwema1970, mushure mekubudirira kwavo severedzi dzeterevhizheni, kuroorana kwaSonny naCher kwakatambudzwa zvakare. Muna 1974, Sonny akazvitsaurira kuti aparadzanise, uye Cher akatarisana nehutano. Kurambana kwavo kwakagumiswa munaJune 1975. Mazuva mana gare gare akaroora muimbi wemhanzi Greg Allman weWorman Brothers Band uyo aive naElia Blue akaberekwa munaJuly 1976. Cher naGreg Allman vakarambana muna 1979. Panguva iyoyo, aigara Mutungamiri wokutsvoda Gene Simmons.
Muna 1978, Cherilyn Sarkisian La Piere Bono Allman zvakashandura zita rake kumanyoko, Cher. Akakurumidza kugamuchira chimiro cheamai vasina imwe nevana vaviri vari kushanda zvakaoma kuzviriritira iye nemhuri yake. Kunyange zvazvo aive achida kuwirirana nevarume vakawanda vaduku muma1980, kusanganisira Val Kilmer, Tom Cruise, Bon Jovi, guitarist Richie Sambora, uye muchengeti wegel Robeltiti ane makore 22, Cher haana kuroorwa zvakare.
Sonny Bono akafa muchiitiko chemhepo muna 1998, uye Cher akatumira runyararo pamariro ake. Akamutumidza, "chimiro chisingakanganwiki" chaakaonana nacho. Mutero kwaari, iye akagamuchira TV yeBBCS inonzi yainzi Sonny & Me: Cher Remembers muna May 1998.
Nokuda kwechikamu chekupedzisira kwema1960, zvichienderana nekubudirira kwake kwekutanga solo, Cher bal balance solo inofanana ne "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)" pamwe neMwanakomana wake naChonde kubudirira "Ndakuwana Mwana" uye "The Beat Goes On." Zvisinei, pakuguma kwemakore gumi, ruzivo rwokutengeserana rwe duo neCher semunhu mumwe muvambi zvose zvakapera.
Muna 1971, Cher yakatanga yekutanga yezvakawanda zvayo. The Sonny & Cher Comedy Hour yakatanga paTV munaAugust 1971, uye Cher yakaitevera neyokutanga ye # 1 pop hit single "Gypsys (sic), Tramps & Thieves." Mumakore matatu, akasunungura vana vatatu vep pop hits, uye vatatu vavo vakaenda kuenda ku # 1.
Mushure mokunge imwe inopera mukududzirwa neyamhanzi rwiyo rwenzira mumakore ekuma1970, Cher akatumbuka pa disco discogon uye akadzoka kune gumi gumi ne "Nditore Me Home." Kudzoka kwake kwaive kwenguva pfupi, uye dombo rake risina maturo boka reBlack Rose rakakundikana kutarisa ne-self-zita ravo album.
Cher akashandisa zvakawanda zvekutanga kwema1980 achikuridzira basa rake. Mumazuva ekupedzisira emakore gumi, akanyorera Geffen Records kuti atange hurukuro yechitatu yekudzoka. Kubva muna 1987's "Ndakawana Mumwe Munhu," Cher's new blend ye pop uye dombo akamuunzira mamwe gumi pamusoro pep hits kusanganisira 1989 "Kana Ndikatadza Kudzoka Nguva," imwe yevanyori vayo.
Kushamiswa kwevakawanda, Cher aive nemimwe mimhanzi huru yakadzoka shure kwemaoko ake mushure mekupera kubva pakuonekwa kwemazhinji ema1999s. Iko kutamba mumwechete "Kutenda" kwakagamuchirwa seimwe yezvinobudirira zvakanakisa zvebasa rake uye yakasvika kusvika ku # 1. Icho chakange chakakundwa zvikuru munyika yose uye yakatumira iyo teknolojia yekuzvidzivirira kuti iite pop mimhanzi. Rwiyo rwacho rwakatanga rwonzi rwemakumbo nguva dzose paBridboard's dance dance chati yakaenderera mberi kwemakore 15 anotevera.
Muna 2002, Cher akatanga chirongwa chekuenda. Akange asiri kurega kubhadhara nekuita, asi akanga achida kubvisa kubva kugaya rekushanya kubva muguta neguta. Pakutanga yakarongwa se 49 inoratidza, rwendo rwakawedzerwa kakawanda. Pakazosvika pakuguma muna 2005, kutarisa kweKiro kwakapinda maitiro 326 uye yaiva imwe yezvikwereti zvepamusoro-soro zvinotambira $ 250 mamiriyoni. Akaitevera nemakore matatu aigara muRas Vegas akawana $ 60 Mamiriyoni gore kubva muna 2008 kusvika muna 2011.
Anopfuura makore gumi mushure mekunge aenda rwendo rwekutanga, Cher akarovazve mugwagwa muna 2014 paDressed To Kill tour. Pashure pemakore makumi matatu nemasere akatengesa-kunze, yakabviswa pamagumo nekuda kwehutachiona hwepfungwa. Cher yakatanga imwe nzvimbo yeLas Vegas kugara kwegore ra2017.
Cher akada kuva mufaniriri wemufirimu asati aenda kuNew York muna 1982, akatora zvidzidzo zvekuita, uye akabhadhara kubudiswa kweBroadway Kudzoka kune Five uye Dime, Jimmy Dean . Akabva atopiwa chikamu mufirimu yeSilkwood, iyo yakagamuchira rukudzo rukuru kubva kuvatsoropodzi. Nokuda kwekuita kwake mufirimu, Cher akawana mubayiro weGold Globe weMutariri Mukuru Wokutsigira.
1987 yaiva gore rinokosha reCher's career. Akatora mumafirimu matatu anosanganisira Suspect , The Witches of Eastwick , uye Moonstruck . Iyi yekupedzisira yaiva yekutengeserana uye yakatsoropodza smash kuwana Cher Academy Award ye Best Actress. Akangoerekana ari mumwe wevanonyanya kudiwa mafirimu emakore ekuma1980 achiwana $ 1 mamiriyoni firimu.
Cher yakabudirira mafirimu emufaro yakange yakajeka. Gore ra1991 mafirimu Mermaids yakawana kubudirira mune zvemabhizimisi. Muna 2010 akaita shanduro yakakurumbira kumafirimu muBurlesque . Rwiyo rwavo kubva kumabhidhiyo, "Iwe Hauna" Kuona Pakupedzisira Kwangu, "yaiva # 1 dance hit single.
Cher yave ichipembererwa nekuda kwekudzivirirwa kwevakadzi kusununguka kwevarume-vanotungamirirwa nemabhizimisi. Zvisarudzo zvake kuita rwiyo rukuru rwemhanzi, kubvuma disco, uye kupfeka zvipfeko zvekunze ndezvake. Sezvo mukadzi wekare akarova # 1 pane chati yepakati paaiva nemakore 52, Cher zvakare akaratidza kuti michina yezoridhi yezvivaraidzo inogona kugadziriswa.
Cher anoenderera mberi achigadzirazve chimiro chake kuti aite zvinoenderana uye agare munzvimbo inoonekwa kunyange apo kubudirira kwekutengeserana kwakanga kusiri. Mumakore ekuma1980 akaratidza kushandurana kwake semushambadziri nekukunda Chikwata Chechikoro chekuita. The New York Times yakamutumidza zita rokuti "Queen of the Comeback."
Cher inoonekwawo sechiratidzo chemagariro evanhukadzi. Anopembererwa nevarume vanoita zvepabonde nokuda kweruzivo rwemaitiro uye kusagadzikana kwake mune zvevaraidzo spotlight. Anowanzotora nyaya yekutevedzera nevanokurudzira mapeji. Cher uyewo akagamuchira mharaunda ye LGBT apo mwana wavo mukuru akabuda ari gay uye akazoshanduka kubva kumadzimai kusvika kune varume sa Chaz Bono.
Top 5 Cher Songs
"Bhuku Rangu" (1966): Rakanyorwa naSonny Bono, rwiyo urwu rwakava Cher's top top 10 pop hit semunhu munyori ari kukwira kusvika ku # 2. Mugore rimwechete reCher's version, Nancy Sinatra akanyora chivako chakave chakanonoka kuzivikanwa nekufamba kwenguva. Nancy Sinatra version ye "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)" yakashandiswa mukuvhura kwekambani yefimiti yeKill Bill Volume 1 uye yakashandurwa mumusoro 3 UK pop hit "Shot You Down" ne Audio Bullys yakabudiswa muna 2005.
"Gypsys (sic), Tramps & Thieves" (1971): Rwiyo urwu rwakava Cher's first # 1 pop hit. inosanganisira kubatsiridza kubatsirana kubva kunyanzvi yeWrecking Crew boka revaSon Angeles svondo vomuimbi. Rwiyo rwekubudirira rwiyo rwakabatsirwa nekuratidzwa mu hit hit tv The Sonny & Cher Comedy Hour .
"Half-Breed" (1973): Kunyange zvazvo yaiva nharo mune dzimwe nzvimbo nemhosva dzeKer commercializing yake Cherokee heritage, "Half-Breed" yaiva ye1 # smash hit. Yakanga iri yepiri yechipiri yegoridhe isina kutendwa. Rwiyo urwu runomirira Cher's early-1970s commercial peak.
"Kana Ndikatadza Kudzoka Nguva" (1989): Pakutanga, Cher haana kufarira rwiyo urwu rwakanyorwa naDiane Warren. Zvinonzi, Warren akapfugama pamabvi ake ndokukumbira Cher kuti aichengete. Rwiyo rwakava "# 3 pop hit," uye iyo yemavhidhiyo yemavhidhiyo naCher achiita pahondo yehondo inonzi imwe yeiyo inonyanya kuratidza basa rake.
"Tenda" (1998): Rwiyo urwu rwuri rwuri rwakaparidzirwa kwemwedzi paWarner Bros. record label pasina munhu anoda. Pakupedzisira, shanduro yakazara yenziyo yakagamuchirwa naCher. Kushandisa teknolojia itsva yekutsvaga, ruzivo rwakasiyana rwekudhinda runotora Cher kune # 1 pane pop singles chati panguva yekutanga mumakore makumi maviri nemaviri. Billboard yakaratidza kuti iyi ndiyo ye # 1 yakawanda yakabudirira yakasununguka muna 1999, uye ndiyo yakanyanya kukunda yeCher's career.
Zvimwe pane Country Music Backup Singer, Marty Slayton
10 Dombo Rokufukidzira Nziyo Dzakanaka Kupfuura Mavambo
Nhoroondo ye "Tora Izvozvo"
11 Inokosha Black Folk Music Artists
A Biography of Country Music Duo Rudo uye Kubata
A Biography and Song Rwendo rweDuo Montgomery Gentry
Chokutanga Bhizinesi Cloze Mabasa eDolch High-Frequency Words
Mazita emarudzi eUnited States
Hondo ye1812: Zvinoshamisa paGungwa & Ineptitude Panyika
Kaaba kuMecca: Image Gallery neZvifananidzo, Zviratidzo, Mifananidzo, uye Diagram
Zvigaro zveIslam zvingave zvakasvibiswa muImiNhizha yeIndaneti?
Kubatana kwenzira: Mazita eZvirevo zveMutauro nemashoko
Rwendo rweMakamu Akaparadzwa nekusvuta
Pane nzira "yakarurama" yekuita chiratidzo chemuchinjikwa here?
"Mwari Nyarara Ye Merry Gentlemen" Chords & Lyrics
Zvakawanda zveVerbiage mukukurukurirana neArguments
Chisarudzo cheDare Repamusorosoro muna 1957: Roth v. United States
Formula Mass Tsanangudzo uye Muenzaniso Kuverenga
Nzira Yokunyora Nayo Science Fair Project Report
Mutemo-Mutsara Arguments muRuby
Ko Sharpie Tattoos Safe?
University of Mary Washington GPA, SAT uye ACT Data
Pamusoro Inosarudza Kutamba Makadhi
10 Quotes to Create Unique and Beautiful Wedding Vows
Nzira Yokugadzira Izwi Rako
Kudzidza Lingo muChikoro cheMutemo
Muhammadi Ali Anova Mutambo Wemasimba Ane Masimba
Jona uye Whale - Nhoroondo yeBhaibheri